Yeka amabhulogi ogaxekile nge-Semalt
Kubalulekile ukuvimbela ithrafikhi embi evimbela ukuthi ungafinyeleli kusayithi lakho futhi ubonise ukubukwa okungalungile ku-Google Analytics yakho. Okokuqala, kufanele uqonde ukuthi ngabe ithrafikhi yakho ivela ku-Google noma i-bots iyabandakanyeka. Uma ubona ukunyuka okungalindelekile emotweni, kunamathuba wokuthi akulona iqiniso njengoba ungakaze wenze i-SEO ngokufanele. Ku-Google Analytics, kufanele uvakashele isigaba seMithombo yeTraffic bese uhlola izinga lomgwaqo kanye namakheli e-IP. Abakwa-Web crawlers, ama-robot noma abaqabulayo ngokuzenzakalelayo: ungawaqamba igama kodwa ungawagodli iqiniso lokuthi isofthiwe isebenzisa i-World Wide Web njengabantu bangempela. Ngeshwa, abanikeli inzuzo kumawebhusayithi wakho futhi bazenza sengathi benze abantu, bakunika imibono eminingi - oculos de sol preco. Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukuthi akunakwenzeka ukuba noma ubani aqhube umgwaqo omkhulu kwiwebhusayithi yakhe ngenxa yomncintiswano ophezulu. Ungaqeda imizamo yakho ngokushaya ibhola elingakwazi ukukhombisa indawo yakho kwisayithi yokusesha injini . I-Google ibheka kuphela izixhumanisi namakhasi anikezela abasebenzisi ngolwazi lwangempela nolokweqiniso. Uma unama-spambots amaningi abonakala njengabantu bangempela, kufanele ufune izixazululo emaforamu lapho imisebenzi elwa nogaxekile ivame ukuxoxwa khona. Futhi uma ukhathele ama-robot angabonakali, i-bots ne-malware yenzelwe ukunikeza ukubukwa kwekhasi, ukushaya amanga, kanye nokunye ukuchofoza kokuxhumanisa, ngaphandle kokukuvumela ukuba udale imithwalo yangempela.
Siyabonga, kungenzeka ukuthi ususe ama-bots nogaxekile ngokugcina engqondweni izinto ezimbalwa ezibalulekile. Kule ndaba, uMx Bell Bell, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, unikeza ukucabangela amathiphu alandelayo:
Ungaqonda inkinga yangempela ye-bots kuphela uma ucabangela ezinye zezibonelo..Isibonelo sokuqala ukuthi uma une-Google bots, lezi zivame ukuklanywa ukukunika ukubukwa kwekhasi elifana nomuntu. Ungase futhi uhlupheke kusuka kubhobhu enzelwe ukukuphoqa ukuba uvuselele amakhasi akho wewebhu. Bobabili bavakashela amasayithi akho, ukwandisa imoto nokuhlaziya i-analytics. Banezinga eliphezulu lokunciphisa futhi basebenzisa isikhathi esincane kumakhasi wewebhu. Umehluko kuphela phakathi kwalezi bots ezimbili ukuthi i-Google bots yenza okuthile okuzuzisayo, ukunika idatha emuva ukuze kubhale izingosi zakho, kuyilapho amabhuki okuvuselela ahambisa izibalo zakho zethrafikhi ngokwezinga elikhulu, ukubeka izinhlelo zakho ezihambisanayo engozini. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukubona ama bots kanye nokuwavimbela ngokushesha ngangokunokwenzeka. Awudingi ukwenza okuningi njengoba i-Google inikeza izinhlelo eziningi namathuluzi okwenza umsebenzi wakho ube lula. Abakwa-spammers bangase bavimbele i-bots yabo isikhathi esithile, kodwa ukuvimbela eceleni kwakho kufanele kube unomphela ngemiphumela engcono.
Ukuvimbela i-Bot Traffic engadingeki
Ungavimbela ukuhamba kwe-bot engadingeki namafayela we-.htaccess. Uma uvimbela ama-bots kulawa mafayela, uzokwazi ukuthuthukisa ukusebenza jikelele kwewebhusayithi yakho. Ukusebenzisa le ndlela, ungavimba kuphela amabhubhu angaziwa futhi aziwa ngokuthi ama-spambots. Uma i-bots zizikhomba njengezisebenzisi ezisemthethweni, kungcono ukuvimba amakheli e-IP ngokushesha ngangokunokwenzeka. Awukwazi ukuvimba wonke amabhubhu kuze kube yilapho unquma amakheli abo e-IP bese ulungisa izilungiselelo kumphathi wakho wewebhu.
Enye indlela ivimbela i-bots ngokusebenzisa amafayela akho we-.htaccess. Kubalulekile ukuthi uvimbele amakheli amaningi e-IP ngangokunokwenzeka, noma ufake amakheli we-IP angaphephile nalawo ephephile. Uma ungumsebenzisi we-WordPress, kufanele ubhekane nomgwaqo omubi we-bot njengoba lokhu kuyisiteji lapho abahlaseli behlasela amafayela ngenani elikhulu. Ungahlela ifayela lakho le-.htaccess, bese ufaka amakhodi ahlukene ukuze uhlale uphephile ku-intanethi.